Hadinonareo ny Barean’i Madagasikara | NewsMada
Hadinonareo ny Barean’i Madagasikara
Afaka dimy andro, hanatanteraka ny fifidianana solombavambahoaka ny Malagasy. Ekena fa zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny firenena izany, saingy toa tsy asian’ny vahoaka lanjany loatra raha mitaha amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra, “Can 2019”, izany.
Iray volana anio tokoa mantsy no hiditra an-tsehatra amin’izany ny Barean’i Madagasikara, voalohany eo amin’ny tantaran’ny baolina kitra malagasy ny hanaovany izany. Efa ambentin-dresaky ny olona izany lalao goavana izany.Tsy misy tsy miresaka izany, na kely na lehibe na antitra na tanora, fa miresaka ity “Can 2019” ity avokoa. Vitsy ny mba miteny ity fifidianana solombavambahoaka ity.
Na izany na tsy izany, tena hadinon’ireo kandidà ity ekipam-pirenena malagasy ity. Tsy ao anatin’ny sain’izy ireo akory na ny hanolotra rano iray tavoahangy azy ireo fotsiny aza. Ny Barean’i Madagasikara izay mitady fanampiana etsy sy eroa hiatrehana izany “Can 2019” izany.
Tsy atao mahagaga loatra izany satria misy ireo tsy mitempo fo amin’izany Barean’i Madagasikara izany, izay sambany hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika ny ankamaroan’izy ireo. Variana amin’ny fanaovana ronono an-tavy sy kabary tsara lahatra fotsiny.
Raha ny tsaroana mantsy, nifarombahan’ireo kandidà ho filoham-pirenena telo mirahalahy, noheverina fa goavana, tamin’izany fotoana izany, ny nanolotra fanomezana ho an’ny Barean’i Madagasikara, fony mbola niatrika fifanintsanana ry zalahy.
Nahafinaritra ireo mpilalao sy ny mpitazana izany fihetsika izany. Nahitana taratra fa tena laharam-pahamehana ho azy ireo tokoa ny fanatanjahantena. Mifanohitra amin’izany kosa ny an’ireto kandidà solombavambahoaka fa hadinony tanteraka ny fisian’izany Barean’i Madagasikara izany. Eny e! Mety ho tsy nahy ilay fanadinoana fa tsy mbola tara raha hanome vola ianareo fa aza menatra.